FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA OLDE BOSTON BULLDOGGE DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Olde Boston Bulldogge Dog
'Agnes dia mpiandany amin'i Cody an'ny FMR, ary ny tohodranony dia zazakely an'ny FMR. Ny ra sy ny reny dia ra Henley madio izay nitazona fenitra avo lenta nandritra ny taona maro. Agnes dia ohatra tonga lafatra amin'ny dinamita tonga amina fonosana kely. Ny fiara sy ny hamafiny dia ivelan'ity tontolo ity. Atleta kely sy maharitra, Agnes dia alika kely henjana izay tia traikefa nahafinaritra. Mihanika hazo miaraka amin'ny fahasoavan'ny Sherman Tank izy, ary tsy matahotra mihitsy. Agnes dia alika mamy ao an-trano tahaka azy, ary fantatra fa matory amin'ny 'antoandro! Tiany isaky ny miaraka amin'ny olona izy, ary tiany ny ankizy. Agnes dia manana endrika taloha be any Boston izay manakana ara-bakiteny ny olona amin'ny lalany. Alika kely mahafinaritra tokoa! 22 lbs. ' Sary natolotry ny Noble Boston Bulldogges
Bulldog taloha tao Boston
Ny Olde Boston Bulldogge dia be fitiavana sy mifamatotra tsara amin'ny fianakaviana. Ity alika miasa ity dia mora hampiofana ary tia mifaly. izy mangetaheta fitarihana ary ny fahatakarana izay antenaina aminy. Tokony hanapa-kevitra ny tompony ny lalàna ny trano ary mifikira amin'ireny.
Milanja: 25 - 45 pounds (11,3 - 20,3 kg)
Salama amin'ny ankapobeny
Olde Boston Bulldogges dia tsara ho an'ny trano sy ny fiainana an-tanindrazana. Tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary manao tsara raha tsy misy tokotany. Ity karazana ity dia marefo amin'ny toetr'andro tafahoatra.
Ity karazana ity dia mila raisina a dia an-tongotra lavitra isan'andro .
lisitry ny karazana club kennel amerikana
Manodidina ny 10 ka hatramin'ny 12 taona
Ankizy 3 ka hatramin'ny 5 eo ho eo
Ny palitao malama sy lava volo dia mora taovolo. Afangaroy sy borosio amin'ny borosy lava volo ary mandro raha tsy ilaina. Sasao amin'ny lamba mando isan'andro ny tarehy ary diovy tsara ireo maso malaza. Hamarino na ny sofina na ny maso ny masomboly ahitra. Mety hidona ao an-tsofina ihany koa ny kitapo. Tokony hohetezina indraindray ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Olde Boston Bulldogge no Boston Bull tany am-boalohany, ny karazany izay Boston Terrier nivoatra avy, noho izany ny tantara tany am-boalohany ny Olde Boston Bulldogge dia mitovy amin'ny an'ny Boston Terrier. Io no karazana sy endrika natiora fantatra amin'ny anarana hoe 'The Bull an-doha boribory sy Terrier' any Boston, Etazonia (ilay karazana Boston Terrier taloha). Ny Olde Boston Bulldogge dia karazany misaraka amin'ny Boston Terrier.
IOEBA = Fikambanan'ny Bulldogge anglisy taloha
'Ity i Loki, Olde Boston Bulldogge, iray taona. Avy amin'ny laharana Rutan, FMR ary O'klassic izy. Tena voatosika izy ary dodona sy vonona hampifaly azy! Mahazo dera am-polony maro ny endriny sy ny toe-batany na aiza na aiza alehantsika. '
Loki the Olde Boston Bulldogge amin'ny taona 1 avy amin'ny tsipika Rutan, FMR ary O'klassic.
'Kaw dia mpiambina an'i Clyde, mpianatr'i Goodtime Kennels. Clyde dia zazalahy lehibe manana taolana mavesatra ary bika Olde Boston mahafinaritra. Ny tohodranon'i Kaw dia atleta voajanahary ary mpamokatra atleta, Daisy Goodtime's. Kaw dia teraka tany Kanadiana ary teraka, ary nisy fiatraikany tsara teto Etazonia dia zazavavy malemy paika sy mpanao fanatanjahan-tena afaka mandehandeha i Kaw. Mamy sy mahatsiaro ao an-trano, mahafaly azy ny miaraka. 28 lbs. ' Sary natolotry ny Noble Boston Bulldogges
asehoy ahy ny sarin'ny alika chihuahua
'Willie dia mpiara-miasa tamin'i GrCh Kodiak nohajaina indrindra. Ny tohodranon'i Willie dia i Kaw, izay nobeazin'i Goodtime Kennels. Kaw dia mpamokatra atleta kanadiana kalesy avo volo Willie izay ohatra tsara. Niorina avy amin'ny tsara indrindra amin'ny tsara indrindra amin'ny Bulldogges maoderina Boston, Willie dia vatana vaovao tsy misy kilema amin'ny karazana Boston Bull sy Terrier taloha. Rivotra lava be sy matanjaka amin'ny habeany i Willie ary ny faniriany hiasa sy hilalao dia tsy maintsy inoana. Tena be fiaraha-monina izy ary tiany ny olona rehetra — indrindra ny ankizy. 30 lbs. ' Sary natolotry ny Noble Boston Bulldogges
Mihaona amin'i Madison! 'Izy no resaka ao an-tanàna. 2 ½ taona ary lohana boribory tena izy. Izy dia avy amin'ny Boston Bulls tany am-boalohany talohan'ny niterahana azy. Vehivavy kely mahia izy, 14 kilao (14 kg). '
'Ity dia manga manga, OBB lahy antsoina hoe BigBully Kennel's Rebel.'
'Blue merle, Olde Boston Bulldogge lahy antsoina hoe BigBully Kennel's Rebel.'
'Ity i Tonka, alika kely Olde Boston Bulldogge, 3,5 volana avy any BigBully Kennels.'
Murphy ny brindle volontsôkôlà sy ny alika fotsy Olde Boston Bulldogge amin'ny faha-6 volana
Jereo ny ohatra bebe kokoa momba ny Olde Boston Bulldogge
Sary Olde Boston Bulldogge 1
Sary Olde Boston Bulldogge 2
Sary Olde Boston Bulldogge 3
inona ny alika daisy
laboratoara mainty sy pitbull
lava volo chihuahua rat terrier mix
sarina alikakely alika kely
Malagasy bulldog laboratoara Mix habe